वयस्कहरूको झूट जीवन, भावनाहरूलाई बाधा पुर्‍याउने सत्य | वर्तमान साहित्य
सेप्टेम्बर २०२० मा इटालियन लेखक इलेना फेरान्टेले उनको उपन्यास प्रकाशित गरे वयस्कहरूको झूट जीवन, एक निर्विवाद सम्पादकीय सफलता बन्न। यसबाहेक, लेखक को हो भनेर थाहा छैन भन्ने तथ्यले - उनको अज्ञात छ - उपन्यास जनतालाई बढी आकर्षक देखिन्छ। यस अर्थमा यो आविष्कारको कहानी हो जुन एक केटीले वयस्कहरूको लुकेका बानीहरू बारे बनाउँदछ।
यस तर्क अन्तर्गत, हामी सम्भावित द्वन्द्वको कहानी एक किशोरावस्थामा उत्पन्न भएको थियो किनभने भावनाहरु लाई अवरोध पुर्याउने सत्यको अभिव्यक्तिको कारण हो। यसैले, कथावाचक, जियोभान्ना, पहिलो व्यक्तिमा आफ्ना अनुभवहरू सुनाउँछिन् र बिना कुनै चाल चालनाका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्घटनाहरूका बारेमा पाठक। उही समयमा, मुख्य प्रकारको जटिलता र एकजुटता उत्पन्न हुन्छ।
1 लेखकको बारेमा, एलेना फेरेन्टे
1.1 एलेना फेरेन्टे, उनको साहित्यको उत्पादन
1.2 लगभग तीन दशक साहित्य
2 वयस्कहरूको झूट जीवनको सार
2.1 प्रारम्भिक दृष्टिकोण
2.2 परिवार रहस्य
2.3 जवाफ दिने तरिकाको रूपमा पुस्तकहरू
3 वयस्कहरूको जीवनमा द लाइ Life्ग लाइफ पुस्तकको संक्षिप्त विश्लेषण
3.1 पुस्तकको विषयवस्तु
3.1.1 आशा र ज्ञानको खोजी
3.2 यस्तो शैली जसले पाठकहरूलाई जित्छ
यस लेखकका लागि विशेषण रहस्यमय एक अपरिहार्य स्थिर हो किनभने उनको पहिलो उपन्यास लगभग तीन दशक पहिले प्रकाशित भएको थियो। ठीक छ, आजको लागि, लेखकको पहिचान निश्चित छैन, ईमेलले अन्तर्वार्ता पछाडि। यो केवल ज्ञात छ - मानिन्छ - उनी १ 1943 XNUMX मा नेपल्स, इटालीमा जन्मेकी थिइन र एलेना फेरान्टे उपनाम हो।
यी कारणहरूले गर्दा, लेखकको बारेमा केवल अनुमान मात्र छ। यसबाहेक, उनका केही पाठकहरू यो विश्वास गर्दछन् कि उनका उपन्यासहरू आत्मकथा चित्रहरू हुन्। तदनुसार, प्रत्येक नयाँ प्रकाशन सिद्धान्तहरू र अनुसन्धानको साथ एलेना फेरेन्टे निश्चित रूपमा को हो भनेर पत्ता लगाउन गरिएको छ। त्यसकारण, लेखकको बारेमा सब भन्दा सामान्य जीवनी डेटा उनको साहित्य द्वारा चिह्नित हुन्छ।
एलेना फेरेन्टे, उनको साहित्यको उत्पादन
यो केस इटालियन लेखकको पहिलो होईन जसले अज्ञात रहन निर्णय गर्दछ। तर, निस्सन्देह कुरा यो हो कि, अमेजन पोर्टलले औंल्याए जस्तै, यस महिला "वर्तमान साहित्यमा सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो।" त्यहाँ ठीक छ, भनिन्छ कि यसले "विश्वका 20.000.000 countries देशहरुमा २०,००,००० पाठकहरूलाई आकर्षित गर्दछ"। थप रूपमा, वयस्कहरूको झूट जीवन पत्रिका द्वारा चयनित सबै भन्दा राम्रो १०० पुस्तकहरू मध्ये एक हो समय.
फलस्वरूप, उनी एक वास्तविक लेखक हुन् जसरी उनको साहित्य रहेको छ। अर्थात्, एलेना फेरेन्टे (वा जो कोही वास्तवमै उनी हुन्) एक लेखक हुन् किनभने उनको उपन्यास (सबै भन्दा माथि) ले उनलाई सार्वजनिक जीवन दिन्छ। त्यसोभए, यो भन्न सकिन्छ कि उनका उपन्यासहरूले ग्रंथहरूको निर्माताको बारेमा सही जनमत कागजातहरूको सेट स्थापना गर्दछ।
लगभग तीन दशक साहित्य
यो थाहा छ कि एलेना फेरन्टे २०११ मा युरोपभर प्रसिद्ध भयो जब उनले चारवटा पुस्तकहरू पछाडि प्रकाशित गर्न शुरू गरे। पछिल्लो को रूपमा चिनिन्छ दुई साथीहरू, चौथो उपन्यास २०१ 2015 मा (स्पेनिशमा) निकै लोकप्रिय लोकप्रियताको साथ आए। अब तपाइँको पहिलो प्रकाशन १ 1992 XNUMX २ मा इटालीमा थियो, कष्टकर प्रेम, २००२ मा पुनः प्रकाशित गर्न त्यागको दिन.
पछि, उनले प्रकाशित गरे कालो छोरी (२००)), एक शक्तिशाली कथा र रहस्यमय पात्रहरूको उपन्यास, जहाँ यसले उल्लेखनीय साहित्यिक विकासको स showed्केत देखायो। पछि, पहिले भनेजस्तै, २०११ र २०१ between बीचमा उनले आफ्नो अभिषेक गर्ने टेट्रालोजी प्रकाशित गरे। अन्तमा, सुरूवातको साथ वयस्कहरूको झूट जीवन (२०२०), एलेना फेरन्टेले आफूलाई एक महान साहित्यिक घटनाको रूपमा स्थापित गरे।
को सार वयस्कहरूको झूट जीवन
एलेना फेरेन्टेको यो उपन्यासमा, सानो छँदा, जियोभान्नाले उनको आफ्नै आमाबाबुको प्रेमको झूटको मृत्यु पत्ता लगाउँछिन्। यो तब हुन्छ जब उसले आफ्नो बुबाको छोरीको कुरूपतालाई (उसको पहिचान नगरी) सबै कुरा सुन्छ। यस तरिकाले, केटीले नयाँ वास्तविकता सामना गर्नुपर्नेछ, जसमा उनी बुढा मान्छेहरू कसरी झूट बोल्छन् बुझ्दछन्, उनीहरूको नजिकका मानिसहरूलाई पनि।
अनिवार्य रूपमा, सानी केटी आफ्नो परिवारको झूट र व्यवहारबाट प्रभावित हुन्छ (१ 1990 XNUMX ० को नेपोलिटन बुर्जुवा सदस्य)। त्यसैले जियोभन्ना सम्झन्छिन् कि उनका बुबाले "उनी आफ्ना बुआ भिटोरियाजस्तो कुरूप छिन्" भन्छिन्, जसलाई उनी थाँहा थिएनन्।
फलस्वरूप, उसले यस बुआलाई खोज्न थाल्छ र कम आर्थिक अवस्थाको भिटोरियालाई भेट नगरुन्जेल उसको परिवारमाथि शंका लाग्छ। अलि अलि अलि जियोभन्ना बुझ्छिन् कि उनको बुआआ अराजक जीवनले प्रभावित महिला हुन्, आफ्ना बुबाआमा, बौद्धिक र बुर्जुवा वर्गको दैनिक जीवन भन्दा धेरै फरक छ।
जवाफ दिने तरिकाको रूपमा पुस्तकहरू
अघिल्लो अनुच्छेदमा वर्णन गरिएका परिस्थितिहरूको कारण, जियोभन्ना (नियमित पाठक) आफूलाई पुस्तकहरूमा बढी डुबाउँछन्। थप रूपमा, किशोर किशोरीले अध्ययन र शिक्षाको महत्वलाई आन्तरिक रूप दिन्छ। यस सन्दर्भमा, रोबर्टो देखा पर्छिन्, एक शिक्षिका जसले उनलाई निरन्तर नयाँ शिक्षाको खोजी गर्न र आफ्नो बारेमा उच्च अपेक्षाहरू स्थापित गर्न प्रेरित गर्दछ।
यस तरिका मा, कथा प्रगति गर्दछ - यो लगभग चार बर्ष को अवधि कवर - केन्द्रीय कहानी समानान्तर अन्य साना कथाहरू संग। पहिले नै अन्त तिर वयस्कहरूको झूट जीवन, केटीको निश्चितताहरु "आवश्यक शंका" बन्छ। यस विन्दुमा, केहि पनि भनिदैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सीमितता वा सेन्सरशिप बिना नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नु हो।
पुस्तकको संक्षिप्त विश्लेषण वयस्कहरूको झूट जीवन
एलेना फेरेन्टेको यो नयाँ उपन्यासमा घटनाहरूको विकासमा धेरै विषयवस्तु एकसाथ मिसिएका छन्। ती शीर्षकहरू मध्ये, धेरै जसो प्रेम र झूटको वरिपरि घुम्छ। अवश्य पनि, प्रेम एक विश्वव्यापी विषयवस्तु हो, तर लेखकले किशोर किशोरी मार्फत पुग्दछ जसले उनको राम्रो र नराम्रो पक्ष पत्ता लगाउँदछ।
आशा र ज्ञानको खोजी
वयस्कहरूको झूट जीवन जियोभन्नामा बचपन ईश्वरत्वको आदर्शको पतनको वर्णन गर्दछ मुख्य चरित्र, एक चित्त दुखाउने झूटको कारण। यद्यपि, यस किशोरावस्थाका, नजिकैको छलको आविष्कारको सामना गर्दै, सत्यको खोजीको लागि बाहिरको मार्ग देख्दछन् ... आशा एक निर्धारक मुद्दा बन्छ।
अनिवार्य रूपमा, नायकले महत्वपूर्ण द्वन्द्वहरूको सामना गर्नुपर्दछ, केटीको भावनात्मक विकासको लागि अत्यन्त नाजुक अवस्थामा। महिला जियोभन्नाको साइकी त्यो आत्म खोज र ती भावनाहरूमा धेरै निर्भर गर्दछ। जो मानिसहरुको उपस्थिति को महत्त्व को बारे मा विशेष प्रकाशहरु पनि पुग्छ।
यस्तो शैली जसले पाठकहरूलाई जित्छ
सफलता वयस्कहरूको झूट जीवन यो लेखकको पहिचानको रहस्यमा छैन। अर्को शब्दमा, एलेना फेरेन्टेको साहित्यिक योग्यतालाई मान्यता नदिनु अनुचित हो। तसर्थ, यो स्पष्ट बनाउन यो उचित छ यो एक पहिलो व्यक्ति कथनको भावनात्मक शैली हो जुन पाठकहरूलाई साँच्चिकै संलग्न गर्दैछ।
फलस्वरूप, नायकको आवाजले भनेको कथनले नजिकको प्रभावको अनुकरण गर्दछ, जसले केटीको सत्यताको गवाही पठाउँदछ।। वास्तवमा, कहानी सुरू हुने बित्तिकै पाठकहरूले यसमा चिनेको महसुस गर्दछन् र अन्तसम्म यसको खोजीमा साथ दिन चाहन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » वयस्कहरूको झूट जीवन